Iindaba - Ukusetyenziswa gwenxa kunokubangela umhlaza, iitawuli ezincinci ziyacelwa nakwiiyunivesithi
Kwenzeka ntoni kwitawuli emva kokuyisebenzisa ixesha elide?
1. Ubutyheli kunye nokunuka
a. Xa sisula isikhumba esibilayo kunye neoli ngetawuli kwaye singayicoci rhoqo, itawuli iye iqokelele ukutyeba nokungcola. Emva kwexesha elide, ihlala iziva incangathi. Xa isomile, iya kuba tyheli okanye ivelise ivumba elikhethekileyo.
b. Ukuba indawo yakho yangasese ayinamoya, kwaye itawuli ayikhutshiwe ngokupheleleyo emva kokusetyenziswa ngakunye, ukufuma kuya kuqokelela ezantsi kwetawuli, kwaye umphetho ongezantsi uya kuba ngumngundo, kwaye itawuli ngokwendalo iya kuvelisa ivumba elikhethekileyo okanye ukothuka. Into etyheli.
a. Ukuba itawuli isetyenziswe ixesha elide, iinwele ziya kuwa. Xa kushiyeke isiqu samathambo kuphela emva kokuba itawuli iwile, itawuli iya kuba nzima.
b. Itawuli ayicocekanga ngokupheleleyo, kwaye kukho ukungcola okushiyekileyo ixesha elide kulusu kwifayibha.
c. Emva kokuba itawuli ihlanjiwe, ii-loops zixinene kwaye zibekwa elangeni ngaphandle kokugungqa.
d. I-calcium yasimahla kunye ne-magnesium ion emanzini idityaniswe nesepha kwaye unamathela kwitawuli, ekwangoyena nobangela wokuqina kwetawuli.
Iingozi zokusetyenziswa gwenxa
Iitawuli ezininzi zidaywe. Kuqhelekile ukuba iitawuli ezisandula kuthengwa zitshabalale kancinci emva kokuphehlelelwa kokuqala. Ukuba umbala uyaqhubeka ukufiphala, zinokubakho izinto ezimbini ezinokwenzeka, enye kukuba itawuli yimveliso ehlaziyiweyo, kwaye enye kukuba itawuli isebenzisa idayi engaphantsi. Idayi engaphantsi iqulethe ii-carcinogens ezinje ngee-amine ezinamakha. Xa umzimba womntu unxibelelana ixesha elide neetawuli ezinama-amine anevumba elimnandi, ii-amine ezinencasa zithathwa ngokulula sisikhumba, zibangela umhlaza okanye i-aleji. Ke ngoko, ukuhlamba ubuso bakho ngeetawuli ezidayiwe ngedayi engaphantsi kuyafana nokuhlamba ubuso bakho ngamanzi amdaka avela kwimizi-mveliso, nto leyo eya kuthi ilonakalise kakhulu ulusu lwakho kwaye ibeke impilo yakho esichengeni.
1. Ukubulala iintsholongwane kubushushu obuphezulu yeyona ndlela isebenzayo
Xa ucoca iitawuli, bilisa iitawuli emanzini abilayo imizuzu eyi-10, emva koko uzihlambe ngesicoci. Emva kokuhlamba, hambisa kwindawo engenisa umoya ukuze wome. Ukuba ukufumanisa kunzima ukupheka ngamanzi abilayo, ungayifaka kwimicrowave kwi-oven ye-microwave kangangemizuzu emi-5 emva kokuhlamba itawuli, enokuthi ifezekise nefuthe lobushushu obuphezulu.
2. Coca ngetyuwa okanye isepha enealkali
Unokongeza isepha ene-alkaline emanzini okanye uhlikihle ityuwa, emva koko uhlambe ngamanzi acocekileyo emva kokuhlamba ukuphucula ivumba elimthubi okanye okhethekileyo wetawuli.
3. Deodorize ngeviniga kunye nesoda yokubhaka
Ukuba ufuna ukususa ivumba elikhethekileyo leetawuli, ungongeza iipuni ezimbini zeviniga emhlophe kunye nenani elifanelekileyo lamanzi ashushu kumatshini wokuhlamba. Sukongeza iisepha, iisoftware, njl., Kwaye uqalise umatshini wokuhlamba ngqo. Emva kokuba inkqubo yokucoca iphelile, yongeza isepha yokuhlamba okanye isoda umgubo kwaye uphinde uhlambe ukuze ususe uninzi lwevumba kunye nokuncamathela.
Ukutshintsha kwetawuli rhoqo
Kuyacetyiswa ukuba ulungiselele iitawuli ezimbini okanye ezintathu zokutshintsha ngexesha elinye. Kungcono ukutshintsha itawuli entsha malunga neenyanga ezintathu, kwaye kungcono ukuyitshisa itawuli ngamanzi ashushu kube kanye ngeveki ukuqinisekisa ukuba itawuli icocekile kwaye ayinasifo.